शिशिर भण्डारीको बाईक दुर्घटनाको दृश्य खिच्दा हेर्नेको भिड । ‘भोली हामी भेट्छौ’ गीत खिच्दा हेर्नुस यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस) – Namaste Host
शिशिर भण्डारीको बाईक दुर्घटनाको दृश्य खिच्दा हेर्नेको भिड । ‘भोली हामी भेट्छौ’ गीत खिच्दा हेर्नुस यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस)
March 9, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on शिशिर भण्डारीको बाईक दुर्घटनाको दृश्य खिच्दा हेर्नेको भिड । ‘भोली हामी भेट्छौ’ गीत खिच्दा हेर्नुस यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस)
शिशिर भण्डारीको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । कुशल सञ्चारकर्मी एवम् सामाजिक अभियन्ता शिशिर भण्डारीले ‘भोली हामी भेट्छौँ’ बोलको गीत बजारमा ल्याएका छन् । परदेशी जिवनको मार्मिक कथामा रहेको गीतमा सुजाता केसी र शिशिरको स्वर रहेको छ । शब्द संगीत अभिनय उनि आफैले गरेका हुन भने गीतमा गरिमा शर्मा,सुजाता केसी,गणेश केसी लक्ष्मण अभिकारीको अभिनय देख्न सकिन्छ । ज्ञानेद्र शर्मा हुमागाईं को छायाकंन मा रहेको गीत दिन्सन शाहले सम्पादन गरेका हुन भने शिशिर आफ्नै निर्देशन रहेको छ ।
समाजमा दुखी गरिब अशायको शाहाराको रुपमा अफुलाई समाजमा चिनाउन मन पराउने सञ्चारकर्मी, हाकलाकार एवम् गायक संगीतकार हुन् । शिशिर भण्डारी । पहिलो गीत हाम्रो माया जिन्दावाद दर्शको माया साथ पाएका उनले दुइ दिनको जिन्दगीमा, फोटो फिरिममा लगाएत अपार सफलता हात पारेका उनले धेरै गीतमा अभिनय समेत गरिसकेका छन् । गीतको छायाँकन यसरी गरियो..हेर्नुस
नायिका श्वेता खड्का पछिल्लो दुई हप्तादेखि विबाहका कारण थप चर्चामा छिन् । कहाँ भेटिएला, कोहिनुर, कान्छी, लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेरकी सामाजिक अभियन्ता समेत रहेकी नायिका श्वेताले धनगढीका प्रेमी विजयन्द्र सिंह रावतसँग विवाह गरिन ।यो उनको दोस्रो विवाह हो ।
केही वर्षअघि दोस्रो विबाहका बारेमा इन्कार गर्दै आएकी श्वेताले पछिल्ला दिनहरुमा भने अब आफू एकल बस्न गाह्रो भएको भन्दै श्रि कृस्न उपर एउटा भावपुर्ण स्ट्याटस समेत हालेकि थिइन् ।
श्वेता र विजयन्द्र केही समयदेखि प्रेममा रहेको चलचित्र वृत्तमा चर्चा भए पनि उनले अस्विकार गर्दै आएकी थिइन् । श्वेताले २०७१ असार २३ गते अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेको महिनादिनमै श्रीकृष्णले यो संसारबाट विदा मागेर गएका थिए ।
कर्णाली नदिमा माछाको जा ल तान्दा जब २ शव आए, सबैको उड्यो होस, यी महिला चार छोराछोरी सहित हराइरहेकी थिइन्
गिनी बिस्फोटमा मारिनेको संख्या ९८ पुग्यो, ६१५ घाइते
फुलबुट्टे सारी गाउने अफ्रिकी गायिकाले गाइन फेरि अर्को नेपाली गीत; केहि क्षणमै बन्यो भाइरल(भिडियो हेर्नुस्)
April 30, 2021 Bijay Lama
गायिका अन्जु पन्तले विवाह गर्ने भएकी छिन्, तोकिन् बिहेको मिति Anju Panta
February 21, 2021 February 21, 2021 Bijay Lama
यति सुन्दर छिन गायिका अन्जु पन्तकी छोरी, हेरौं तस्विरहरु
February 22, 2021 Bijay Lama
मनकारी सन्तोष देउजा : १४ लाखको राहत लिएर यसरी पुगे हेलम्बु (भिडियो हेर्नुस् ) June 21, 2021
हिलोमा फसेको ट्रक निकाल्ने प्रयास गर्दागर्दै पहिराले पुरिएपछी…. June 21, 2021
१२ बजे राती चिहानमा भूतसँग बियर खाए युवाले, पत्याउनै नसकिने घटना- युवती चिहानबाट उठेपछि.. मध्यरातमा चुडेलसँग बसेको गहिरो प्रेमको भित्री रहस्य (भिडियो सहित) June 21, 2021
हेर्दा हेर्दै आफ्नै आखा अगाडी आमालाई बाढीले बगायो , बचाउन जादा जादै बढीले बगायो भन्दै भक्कानिए छोरा , आफ्नै आमालाई खोलाले बगाउँदा छोराले कसरी सहे होलान् ? (भिडियो) June 21, 2021
नपत्याउने खोलाले मनाङको पुरै बस्ती नै बगायो, कति क्षति भयो भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन June 20, 2021